Telefaona Ubuntu - Ubunlog | Ubunlog (Pejy 2)
OTA-13 dia hanatsara ny fifanarahana amin'ny PinePhone sy PineTab
UBports dia miasa mba hahatonga ny rafitry ny asany hiasa tsara kokoa ao amin'ny PinePhone sy ny PineTab, zava-misy ao amin'ny OTA-13-
Azonao atao izao ny manafatra ny tablette PineTab amin'ny Ubuntu Touch
Nanambara ny fiarahamonina Pine64 andro maromaro lasa izay ny fanombohana ny fahazoana baiko amin'ny takelaka PineTab 10.1 m ...
Ny Ubuntu Touch OTA-12 dia eto ary afaka mirehareha amin'ny maha-dikan-teny voalohany azy izay mandray ny tontolon'ny sary fantatra amin'ny anarana hoe Lomiri.
Ubuntu Touch OTA-12 Ho avy amin'ny 6 Mey miaraka amin'ny efijery fanatsarana trano
UBports dia nandroso fa ny OTA-12 an'ny Ubuntu Touch dia ho tonga amin'ny fiandohan'ny volana Mey, amin'ny faha-6, ary eo amin'ireo zava-baovao dia hanana efijery an-trano nohatsaraina isika.
Redmi Note 7 an'ny Xiaomi dia mahavita mihazakazaka Ubuntu Touch noho ny mpamorona iray
Nahazo ny Redmi Note 7 mpandraharaha iray hitantana ny Ubuntu Touch, ny rafitra miasa finday ao Ubuntu izay novolavolain'ny UBports.
Ny firaisana 8 dia maty; ho ela velona lomiri
Lomiri. Toy izao no nanalan'ny UBports ny tontolo sary namboariny hatramin'ny nandaozan'ny Canonical ny Unity 8 sy ny fiarahan-dia. Lazainay aminao ny antony.
Ubuntu Touch izao dia azo alefa amin'ny Raspberry Pi 3. Mazava ho azy, raha ampiana ny tontonana ofisialy mikasika
UBports dia nizara fanamarihana iray izay niresahany momba ny drafitra ho avy ary nanampy fanampiana izy ireo amin'ny fampandehanana ny Ubuntu Touch amin'ny Raspberry pi 3.
Ubuntu Touch dia manohy mandroso, porofon'ny fanombohana sary 64-bit ARM an'ny rafitra fikirakirana finday Ubuntu.
Ubuntu Touch OTA-11 vonona ny hizaha toetra, dia manana klavier mahay kokoa
UBports, izay efa nitantana ny Ubuntu Touch hatramin'ny nialan'ny Canonical azy, dia namoaka OTA-11 ho an'ireo izay maniry sy afaka manampy.
Ubuntu Touch OTA-10 misy izao. Ireo ny vaovaonao
UBports, izay naka ny fivoaran'ny Ubuntu Phone, dia namoaka ny OTA-10 an'ny Ubuntu Touch. Lazainay aminao ny vaovao tena miavaka.
Ubuntu Touch dia manana bug ao Done ary mangataka fanampiana amintsika ny UBports hanamarina raha efa voavaha izany
Manohy manatsara ny Ubuntu Touch ny UBports, saingy mangataka fanampiana aminay mba hahafahan'ny tsirairay manana fitaovana mifanentana manandrana izay omaniny.
Mandroso i Ubuntu Touch: UBports dia miasa amin'ny OTA-10 amin'ny kinova finday an'ny Ubuntu
UBports dia nanamafy fa miasa amin'ny OTA-10 ho an'ny Ubuntu Touch, ilay rafitra fiasa finday izay naato ny Canonical fotoana vitsy lasa izay.
Ubuntu Touch OTA-8 efa misy izao, tonga miaraka amina lohahevitra maizina
Ubuntu Touch OTA-8 dia misy izao. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny vaovao rehetra miaraka amin'ity kinova vaovao ity.
Ubuntu Touch OTA-8 dia ho tonga amin'ny 6 martsa
UBports dia namoaka ny vaovao efa nomanin'izy ireo tamin'ity fanombohana vaovao ity. Anisan'izany azontsika atao ny manasongadina izany fifindra-monina mankany ...
Ny kinova OTA 7 vaovao an'ny UBports dia tonga miaraka amina endrika vaovao
Ny tetik'asa UBports, izay naka ny fivoaran'ny sehatra finday Ubuntu Touch, taorian'ny Canonical lasa ...
Ny famoahana fahenina OBports OTA dia efa navotsotra
Ny vondrom-piarahamonina UBports dia nanambara ny fanombohana ny fanavaozana ny faha-enina OTA (Over-the-Air) an'ny rafitra fikirakirana finday Ubuntu Touch
Ubuntu Touch OTA-5 tonga miaraka amina browser vaovao ary fanatsarana bebe kokoa
Taorian'ny asa mafy nandritra ny volana vitsivitsy dia nanambara ny UBports andro vitsy lasa izay ny fisian'ny kinova vaovao, dia ny Ubuntu Touch OTA-5 ...
UBPorts dia mandefa ny OTA-4 ho an'ny telefaona Ubuntu ary miaraka aminy ny fahatongavan'i Xenial Xerus
Ny Ubuntu Phone OTA-4 dia misy izao. Ny kinova vaovao voarakitra ao anatin'ny tetik'asa UBPorts dia tsy vitan'ny zava-dehibe fa mitondra fanatsarana mahaliana ihany koa
Ubuntu Touch OTA-4 RC misy izao
Ny ekipa UBPorts dia namoaka ny kinova RC Ubuntu Touch OTA-4, kinova manavao ny rafitra fiasan'ny finday ho an'ny Ubuntu 16.04 ...
Ny librem 5 Linux dia hifanaraka amin'ny Ubuntu Phone
Ny librem 5 Linux, ny smartphone noforonina ho an'ny Linux dia hanana kinova miaraka amin'ny Ubuntu Phone na koa, azo vidiana amin'ny Ubuntu Touch ho toy ny rafitra miasa fa tsy Android toy ny fitaovana maro ankehitriny ...
Canonical koa dia manohana ny UBPorts
Canonical dia vao haingana no nanolotra finday finday miaraka amin'ny Ubuntu Phone ho an'ny tetik'asa UBports, ary koa ity tetikasa ity dia namoaka kinova Unity 8 sy kinova Ubuntu Phone ho an'ny Moto G 2014 malaza ...
Ubuntu Phone no ho rafitra Linux voalohany izay mifanaraka amin'ny rindranasa Android
Ny tetik'asa UBPorts dia nitatitra fa tsy ho ela izy ireo dia hiasa amin'ny fitondrana apps Android amin'ny Ubuntu Phone, noho ny tetikasa AndBox mamela izany
UBPorts dia mandefa OTA-2 ho an'ny fitaovana finday Ubuntu
UBPorts dia manohy miasa amin'ny Ubuntu Touch sy amin'ny fitaovana niseho niaraka tamin'ny Ubuntu Phone ho toy ny rafitra miasa. Ankehitriny dia efa manana OTA-2 ho azy ireo izy ireo
UBPorts dia mandroso amin'ny Ubuntu Phone. Tsy vitan'ny hoe manatsara ny fampandrosoana izy fa mampiroborobo ny rafitra miasa finday ao Ubuntu
Ny Nexus 5 dia efa mifanaraka amin'ny tetik'asa UBPorts sy ny fivoarany
Ny Nexus 5 dia nahazo ny fanavaozana UBPorts tamin'ny farany. Nanamafy ihany koa izy ireo ny asa amin'ny tetikasa Helium ary koa ny fahatongavan'ny OnePlus 5 sy 3 ....
Ubuntu Phone Developer dia manazava ny tsy fahombiazan'ny rafitra miasa
Na dia ny fanambarana ny fandaozana aza taloha dia mbola misy ny fitsikerana mafy an'i Canonical sy Ubuntu tamin'ny nandaozany ny Ubuntu Phone sy Convergence ...
UBports dia mamoaka fanavaozana voalohany mikasika ny Ubuntu Telefaona voalohany
Ny ekipan'ny UBports dia nanambara androany ny fanavaozana marim-pototra voalohany an'ny Ubuntu Touch (OTA-1) ho an'ny finday sy tablette Ubuntu.
Mampanantena ny UBports fa hanohy ny tetikasan'ny Telefaona Ubuntu
Ireo mpandrindra antoko fahatelo toa ny UBports dia nampanantena ny hanohy ny fampandrosoana ny sehatra Ubuntu Touch ho an'ny finday sy tablette miaraka amin'i Ubuntu.
Tetikasa Halium, fanantenana ho an'ireo mpampiasa Ubuntu Phone
Ny tetikasa Halium dia tetik'asa fampandrosoana izay manandrana mamorona sehatra rindrambaiko tokana ho an'ny finday rehetra ...
Ny telefaona Ubuntu dia hitsahatra tsy handray fanavaozana ny fiarovana amin'ny volana Jona
Ny finday sy ny takelaka Ubuntu dia tsy hahazo fanavaozana fiarovana intsony manomboka amin'ny volana Jona, ary hikatona hatramin'ny faran'ny 2017 ihany koa ny fivarotana Ubuntu.
Ubuntu Phone dia hanana fivarotana vaovao sy Wayland
UBPorts dia haka ny finday Ubuntu. Araka izany, tsy ho ela izy ireo dia handefa fivarotana vaovao ho an'ny fitaovana finday Ubuntu ary hanao an'i Wayland ho ...
Ny Unity 8 sy ny Ubuntu Phone dia efa manana mpiaro ofisialy
Tsy mbola nisy andro iray taorian'ny nanambarana ny fisintahan'ny Unity 8 ary mpampiasa maro no efa nilaza fa hanohy ny tetikasa efa misotro ronono ...
Inona no hitranga amin'ny telefaona Ubuntu aorian'ny fiverenan'i Gnome?
Ny Unity 8 dia nifarana tao Ubuntu, zavatra izay hitranga koa miaraka amin'i Convergence. Fa efa vita ihany koa ve ny Ubuntu Phone? Mbola hitohy ve ny tetikasa?
Ubuntu Phone dia ho hita ao amin'ny MWC 2017 any Barcelona
Canonical dia hanana ny toerany ao amin'ny MWC 2017 any Barcelona. Ao anatin'izany, ny fanolorana ny Fairphone 2 miaraka amin'ny Ubuntu Phone dia nambara tamin'ny fijoroana ...
Ubuntu Phone OTA-15 dia misy izao
Ny fanavaozana vaovao ho an'ny fitaovana Ubuntu Touch Project dia efa misy. Ity fanavaozana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe OTA-15 ary manamboatra bibikely ...
Hanova ny sariny ihany ny mpizahatany Ubuntu amin'ny farany
Ary farany, hanova ny sariny ny mpitety tranonkala Ubuntu ary hijanona tsy hanana ilay kompà malaza amin'ny sariny mba hanana an'izao tontolo izao ...
Ny OTA-15 dia tsy handray anjara vaovao fa ho zava-dehibe
Ny OTA-15 vaovao dia ho tonga amin'ity taona ity amin'ny alàlan'ny telefaona finday miaraka amin'ny Ubuntu Phone, saingy tsy hanana fiasa vaovao izy io fa hanome fanitsiana bibikely sy olana ...
Ny fampiharana Android dia mety mifanaraka amin'ny Ubuntu Phone
Marius Gripsgård dia nanambara fa miasa amin'ny tetikasa mifandraika amin'ny Ubuntu Phone izy izay mamela ny fametrahana fampiharana Android amin'ny Ubuntu ...
Mir: sata sy fivoarana amin'ny 2016
Canonical dia manamarina ny fivoaran'ny Mir ao amin'ny 2016 sy ny tsipika fiasa ho an'ny taona 2017, miaraka amin'ny tanjona hahatratra ny Ubuntu 17.04.
Resaka Canonical, tsy hisy telefaona Ubuntu na fanavaozana lehibe mandritra ny fotoana maharitra
Nambaran'ny solontena Canonical fa tsy hisy finday miaraka amin'ny Ubuntu Phone mandra-pahatongan'ny fonosana tampoka ao amin'ny ekosistra finday Ubuntu ...
Ny Nexus 5 an'ny Google dia efa finday mifandimby noho ny Ubuntu Phone
Ny Nexus 5 dia efa manana kinova Ubuntu Phone feno noho ireo tovolahy ao amin'ny UBPorts, zavatra hahafahanao mampiasa ny findainao ho solosaina ...
Inona ny vaovao ho azon'ny Ubuntu Phone mandritra ny 2017 ho avy?
Vitsy ny ora sisa hanombohana ny taona 2017 ary mbola tsy fantatsika ny vaovao hoentin'ny Ubuntu Phone amin'ireo mpampiasa azy sy ny tsena ...
Ny OTA-14 vaovao dia azo alaina miaraka amina endrika vaovao maro ho an'ny Ubuntu Phone
Ny OTA-14 vaovao ho an'ny Ubuntu Phone sy Ubuntu Touch dia efa misy izao. Fanavaozana izay mitondra fiasa vaovao marobe ankoatry ny fanitsiana ireo hadisoana ao amin'ny rafitra ...
Ho tara indray ny OTA-14 vaovao. Amin'ity tranga ity dia ho tonga amin'ny fiandohan'ny Desambra. Fanavaozana izay hitondra sary masina amin'ny birao ...
Ubuntu Touch OTA-14 dia ho taraiky be
Hihemotra ny Ubuntu Touch OTA-14, saingy hisy vaovao mahaliana toy ny mpisafidy fampiharana mahasarika kokoa aza.
OTA-14 dia ho tonga miaraka amina multitasking vaovao miaraka amina background sy sary famantarana fampiharana
Tsy ho ela dia ho tonga ny kinova Ubuntu Phone manaraka, OTA-14 izay hanana ny maha-zava-baovao azy amin'ny multitasking vaovao miaraka amin'ireo sary famantarana fampiharana.
Ahoana ny fametrahana ny Open Open Store amin'ny Ubuntu Phone
Te hametraka fampiharana mahaliana amin'ny Ubuntu Phone ve ianao? Amin'ity lesona ity dia hasehontsika anao ny fomba fametrahana ny Open Store hafa amin'ny Ubuntu Phone.
Ny sasany amin'ireo vaovao tonga ao amin'ny Unity 8 amin'ny horonan-tsary
Amin'ity horonantsary ity dia ahitanao ny sasany amin'ireo vaovao tonga amin'ny tontolon'ny sary Unity 8 sy ny fiombonan'ny Ubuntu izay nanomboka tamin'ny volana aprily.
Magic-Device-Tool, fitaovana mahaliana hametrahana Ubuntu Touch amin'ny finday rehetra
Magic-Device-Tool dia fitaovana mamela ny fametrahana mora ny Ubuntu Phone amin'ny finday rehetra, na dia misy ny lesoka sy ny tombony azo ...
Manampy sivana sy fitaovana hanovana sary ny Instagraph
Instagraph, ny fampiharana antoko fahatelo tsara indrindra hidirana amin'ny Instagram avy amin'ny Ubuntu Phone, dia nohavaozina amin'ny kinova 0.0.3 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe.
Ny OTA-13 vaovao dia efa misy ankehitriny, fanavaozana ho an'ireo fitaovana Ubuntu Phone izay manampy fanatsarana be dia be amin'ny rafitra fiasa finday
Ubuntu SDK dia nohavaozina miaraka amin'ny kinova QT Mpamorona farany
Ubuntu SDK dia nohavaozina miaraka amina lafin-javatra vaovao maro, ao anatin'izany ny kaontenera LXD sy ny kinova QT Mpamorona, ny IDE ampiasaina hamoronana fampiharana ...
Ubuntu Touch OTA-13 dia ho tonga amin'ny 14 septambra
Ny kinova Ubuntu Touch manaraka, OTA-13 dia ho tonga amin'ny 14 septambra ary hampiditra vaovao mahaliana. Hilaza aminao izahay.
Tsy mandray fonon-tànana i ZTE: "Android na iOS fotsiny no tadiavin'ny mpampiasa"
Toa tsy hanao ny telefaona amin'ny Telefaona Ubuntu nangatahan'ny mpampiasa iray i ZTE ary ny antony dia aleon'ny mpampiasa sehatra hafa.
Ny mpankafy Ubuntu dia mihaika ny ZTE handefa telefaona amin'ny Ubuntu Phone
Tianao ve ZTE handefa telefaona amin'ny Ubuntu Phone? Eny, mety ho zava-misy izany raha raisin'ilay goavambe Koreana ilay fonon-tànana natsipin'ny mpankafy iray.
Ubuntu Touch terminal dia ho fampiharana mifangaro
Terminal no ho fampiharana Ubuntu Touch core manaraka hanovana sy ho lasa rindranasa mifamatotra, zavatra izay tena hahaliana ny mpampiasa rehetra ...
Ny Ubuntu dia manamora ny fandefasana ny fampiharana iOS sy Android mankany Ubuntu Touch
Ubuntu dia manohy miasa amin'ny fahafaha-mibaiko ny fampiharana iOS sy Android. Ny tena fantatra dia ny fampifanarahana ireo rafitra fampandrosoana toy ny React Native Web ...
Afaka mahazo finday amin'ny Ubuntu Phone ve ianao izao?
Mpampiasa maro no mimenomenona fa sarotra ny mahazo finday amin'ny Ubuntu Phone. Ny tena toe-javatra saingy mihelina izany na antenaina ...
Ny OTA-13 vaovao dia nahemotra hatramin'ny 7 septambra
Ny OTA-13 vaovao dia hahemotra hatramin'ny 7 septambra, na dia amin'ity tranga ity aza ny fiandrasana dia mendrika izany na hoy ny mpitarika ny Ubuntu Touch ...
Canonical dia efa miresaka momba ny vaovaon'ny Ubuntu Touch OTA-13
Andro vitsivitsy taorian'ny nanombohan'ny Ubuntu Touch OTA-12, Canonical dia efa namaritra ny tanjony amin'ny fanavaozana ny OTA-13 an'ity rafitra ity.
Ubuntu Touch OTA-12 miaraka amin'ny fanamarinana biometrika ho an'ny Miezu PRO 5
Navoaka ny fanavaozana farany an'ny Ubuntu Touch OTA-12, miaraka amina fanavaozana kely sy fanohanana amin'ny famakiana rantsantanana sy ny fanamarinana biometrika.
Ireo fampiharana 5 izay efa hitantsika tao amin'ny Ubuntu Phone ary hahatonga antsika tsy hanadino an'i Android
Lisitr'ireo fampiharana Android 5 malaza indrindra azontsika atao amin'ny Ubuntu Phone nefa tsy very asa na tsy mila mandoa izany ...
Ny Fairphone 2 dia efa mifamotoana ary misy video hanaporofoana izany
Ny finday finday Fairphone 2 dia efa manana ny teknolojia Aethercast ao amin'ny kinalan'ny Ubuntu Phone, zavatra azo natao noho ny fivoaran'ny UBPorts ...
Ny OTA-12 vaovao miely dia manatsara ny takelaka BQ Aquaris M10
Ny OTA-12 vaovao dia misy fanamboarana vitsivitsy na dia hanao ny BQ Aquaris M10 manana teknolojia Aethercast ...
Meizu MX6 natolotra tamin'ny fomba ofisialy. Kinova "Ubuntu Edition" teny an-dalana
Taorian'ny volana sy volana maromaro nitetezana, ny Meizu MX6 dia naseho tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety iray tany Shina. Ho avy tsy ho ela ny kinova "Ubuntu Edition".
Tonga ny faha-12 ny OTA-20; OTA 13 dia mbola eo an-dalam-pandrosoana
Amin'ny Alarobia 20 Ubuntu Touch's OTA-12 dia havoaka. Ny OTA-13 dia efa eo amin'ny dingana fampandrosoana ary ho avy miaraka amin'ny vaovao mahaliana.
uWriter, mpikirakira teny ho an'ny finday Ubuntu
uWriter dia rindranasa vaovao izay manolotra ny fahafaha-manana mpanodin-teny tsy amin'ny findainao ihany fa amin'ny tablette sy solosaina birao ...
Ireo telefaona misy Ubuntu Touch dia mahazo ny fanohanan'ny antso Bluetooth
Amin'ny alàlan'ny tetikasa Ubports, nohatsaraina ny fanohanana ireo rafitra tsy misy tanana ho an'ny telefaona miaraka amin'ny Ubuntu Touch, ary koa ireo singa hafa.
Nexus 6 dia efa manana ny roman'ny Ubuntu Phone
Ny Nexus 6 dia efa manana kinova tsy ofisialy an'ny Ubuntu Phone, na dia tsy mandeha tsara sy ny tompony aza ny mpankafy Ubuntu Phone dia maniry ...
Ny famaritana ny Meizu MX6 Ubuntu Edition vaovao dia naseho
Ny toetra ara-teknikan'ny telefaona Ubuntu manaraka avy amin'ny orinasa Meizu dia naseho, ny Meizu MX6 Ubuntu Edition, izay vidiny amin'ny 399 euro.
Ny fianakavian'i Meizu sy Canonical dia mbola tsy nifarana
Ny tsaho avy any Meizu sy Canonical dia manondro ny fivoaran'ny terminal vaovao ataon'ireo orinasa roa ireo izay mety hiorina amin'ny Meizu Pro 6.
BQ dia afaka mandefa terminal vaovao antsoina hoe Midori miaraka amin'ny Ubuntu Phone
Bibikely sy mpampiasa maro no mampitandrina momba ny finday finday vaovao, smartphone amin'ny Ubuntu Phone ary manana solon'anarana Midori, fa an'iza i Midori?
OnePlus 3 dia hanana ny anjarany Ubuntu Phone
Ny OnePlus 3 vaovao dia hanana kinova tsy ofisialin'ny ubuntu Phone, farafaharatsiny izay no natoron'ny ekipa tranokala UBports, tranokala tsy ofisialin'i ....
Manomboka izao dia ho sarotra kokoa ny miresaka amin'ny Facebook amin'ny Ubuntu Phone
Mampiasa chat Facebook avy amin'ny Ubuntu Phone ve ianao? Vaovao ratsy: manomboka izao dia ho sarotra kokoa ny hifandray amin'ireo olona ifandraisanao.
Ny fanamarinana biometrika dia mety ho tonga amin'ny Ubuntu Touch amin'ny ho avy
Ny iray amin'ireo mpamorona Canonical dia miresaka momba ny fivoaran'ny Ubuntu Touch, izay mety hahitana endrika famakiana rantsantanana vaovao.
Hihaona amin'ireo finday tsy ofisialy miaraka amin'ny Ubuntu Phone i Ahercast
Aethercast dia teknolojia iray izay nanova ny Ubuntu Phone sy ireo fitaovany ofisialy, saingy toa toa hahatratra ireo terminal tsy ofisialy izao ...
Ahoana ny fametrahana apetraka taloha amin'ny Ubuntu Phone amin'ny findainao
Fampianarana kely hiverenana amin'ny kinova taloha raha sanatria ny fanavaozana ny Ubuntu Phone vaovao dia miasa bebe kokoa ao amin'ny terminal ...
Ny mpikaroka Ubuntu Touch dia hanatsara be ao amin'ny OTA-11
Ny Ubuntu Touch OTA-11 dia tokony ho tonga mandritra ity herinandro ity ary ny vaovao izay hampidiriny dia ny fanavaozana ny fitetezana tranonkala.
Ahoana ny fametrahana ireo mpitari-dàlana "lehilahy" amin'ny teny espaniola ao Ubuntu
Efa mba nanontany tena ve ianao raha toa ka afaka mametraka ny "lehilahy" amin'ny Espaniola? Raha azo atao. Izahay dia manazava aminao ny zava-drehetra amin'ity lahatsoratra ity.
Rindrambaiko roa ho an'ny mpitendry mozika ao amin'ny Ubuntu Phone
Ankehitriny dia mahazo tanjaka tsy mampino ireo fampiharana finday. Samy manana ny filàny isika rehetra ary ny marina dia ...
Ny Photo Scope dia mamela ny mpampiasa Ubuntu Phone hijery ny sariny Dropbox
Canonical dia nanavao ny Scope Photo mba hahafahan'ny mpisera Ubuntu Phone mahita ny sary nakariny tao amin'ny Dropbox tamin'ny tranga hafa.
Ubuntu Touch OTA-11 dia hahemotra mandritra ny herinandro; tsy ho ela dia hisy asa hatao ao amin'ny OTA-12
Vaovao ratsy ho an'ny mpampiasa Ubuntu Touch: OTA-11 dia hanemotra ny famoahana azy mandritra ny herinandro ary tsy ho tonga intsony amin'ny faran'ny volana Mey.
Ho tonga miaraka amin'i Aethercast ny Ubuntu Phone OTA-11 vaovao
Ny Ubuntu Phone OTA-11 vaovao dia ho vonona tsy ho ela, fanavaozana izay hahitana fampiasa vaovao toy ny Aethercast ...
Canonical dia hanisy fiovana amin'ny sehatra ho an'ny Ubuntu Phone
Ubuntu dia nanamafy ny fisian'ny browser scope ho an'ireo mpampiasa hitantana tsara kokoa ireo fampiharana ireo amin'ny Ubuntu Phone ...
Meizu PRO 5, ny telefaona Ubuntu mahery indrindra, azo zahana eny an-tsena izao
Ny terminal Meizu Pro 5 dia misy izao, ny telefaona Ubuntu mahery indrindra eny an-tsena, miaraka amina endri-javatra mahavariana ary amin'ny vidiny $ 370.
Ireto no kojakoja 10 ilaina indrindra amin'ny BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition
Torolàlana kely momba ny kojakoja 10 manan-danja indrindra ampiasaina amin'ny BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition, kojakoja ahafahana mifamotoana kokoa ...
Plasma Mobile dia mampiasa ny Ubuntu Touch ho fototry ny rafitra
Nanambara ireo mpamolavola ny Plasma Mobile fa hanomboka hampiasa ny Ubuntu Phone ho fototry ny rafitra fiasan'izy ireo, miaraka amin'ny CyanogenMod ...
Meizu Pro 5 Ubuntu Edition dia azo vidiana
Meizu Pro 5 Ubuntu Edition dia azo vidiana. Ny finday Meizu dia amidy amin'ny $ 369, vidiny mahaliana amin'ny zavatra atolony.
Ubuntu dia te hampianatra anao ny fampiasana ny BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition
Ubuntu dia namoaka torolàlana azo sintonina miaraka amin'ireo fomba azo ampiasaina amin'ny Bq Aquaris M10 Ubuntu Edition, ilay takelaka voalohany niangona tao amin'ny BQ ...
Canonical dia tsy mikasa ny hitondra fampitambarana ny Meizu MX4
Vaovao ratsy ho an'ny tompona Meizu MX4, satria ny Canonical dia tsy mikasa ny hampivondrona ireo fitaovana ampiasainy.
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny OTA-10.1 Hotfix
Taorian'ny famoahana ny Ubuntu Touch OTA 10, ny zavatra lojika indrindra dia ny fieritreretana fa ny famotsorana manaraka dia ...
Manomboka manomboka ny Ubuntu Touch OTA-11 ny fanomanana
Taorian'ny famoahana ofisialy ny OTA-10, ny mpandraharaha Ubuntu Touch dia efa nidina tamin'ny asa aman-draharaha miomana amin'ny OTA-11.
Ny mpizaha Ubuntu Touch dia mamela ny kopia sy ny petaka ao amin'ny OTA-10
Ny Ubuntu Touch OTA-10 dia ho avy miaraka amina endrika vaovao, toy ny fahaizana maka tahaka sy mametaka ary manamboatra bug. Mihatsara tsikelikely ny rafitra.
Manomana finday vaovao miaraka amin'ny Ubuntu Phone ve i Meizu?
Meizu dia handefa fitaovana vaovao efatra amin'ny volana ho avy. Amin'ireny terminal ireny dia terminal telo fotsiny no fantatra, ary efatra mety ho fanontana Ubuntu ...
Ny BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition dia azo tahirizina amin'ny 28 martsa ho avy izao
Ny BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition dia azo tahirizina amin'ny 28 martsa ho avy izao ao amin'ny magazay BQ na dia tsy horaisinay aza izany raha tsy ny aprily eo ho eo ...
LibreOffice izao dia azo alefa amin'ny Ubuntu Phone
LibreOffice dia rindranasa izay efa azo ampiasaina amin'ny Ubuntu Phone araky ny nasehon'ny mpampiasa sasany, fiasa marina.
BQ dia manolotra ny Aquaris M10 Ubuntu Edition, ny takelaka voalohany Convergent
BQ dia namoaka ny takelaka voalohany niombonan'i Canonical, ny BQ Aquaris M10 miaraka amin'ny vidiny mifaninana tokoa. Inona no andrasanao mividy azy?
Ireo no finday miaraka amin'ny Ubuntu Phone eny an-tsena
Lahatsoratra kely momba ny finday Ubuntu Phone izay misy eny an-tsena, finday efatra ho an'ny tsiro sy paosy rehetra.
Dekko, mpanjifa mailaka teratany Ubuntu Phone dia toa tsara
Izay ho mpanjifa mailaka tompon-tany ho an'ny Ubuntu Phone dia toa tsara. Nantsoina hoe Dekko izy io ary tsy misy zavatra tokony hialona ireo an'ny iOS sy Android.
Aethercast, ny teknolojia izay hampifandray amin'ny fahitalavitra amin'ny Ubuntu Phone
Aethercast no teknolojia Ubuntu Phone vaovao ahafahantsika mampiasa ny fahitalavitra ho efijery amin'ny finday avo lenta tsy misy tariby na kojakoja ilaina.
Ireo mpandraharaha Ubuntu Touch dia miasa mba hahatonga ny telefaona Ubuntu BQ hifanaraka amin'ny radio FM.
Afaka mihazakazaka fampiharana Ubuntu Touch amin'ny Ubuntu Desktop ianao izao
Manomboka izao dia afaka mampiasa ny Ubuntu Touch Core Apps isika mba hampandeha ny fampiharana Ubuntu Touch amin'ny Desktop Ubuntu misy anay nefa tsy hanelingelina ny sehatra
GPS Navigation, fampiharana ho an'ny Ubuntu Touch ary ho an'ny fiaranay
GPS Navigation dia fampiharana mitovy amin'ny Google Maps saingy mampiasa rindrambaiko maimaim-poana toy ny OpenStreetMap na OSCRM, anko amin'ireo tranomboky hafa ho an'ny Ubuntu Touch.
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Ubuntu One
Ubuntu One dia ho lasa ivon-toeram-pitantanana Ubuntu, ka ity lesona kely ity ho an'ireo vao teraka te-hamorona kaonty.
UbuTab, iray amin'ireo takelaka matanjaka indrindra miaraka amin'ny Ubuntu Touch
UbuTab dia iray amin'ireo takelaka voalohany misy ny Ubuntu Touch, miaraka amin'ny efijery 10 "ary ambany ny vidiny omena azy, ao anatin'izany ny rafitra roa.
Ampidiro amin'ny Nexus amin'ny fomba roa ny Ubuntu Touch
Fampianarana kely momba ny fametrahana Ubuntu Touch amin'ny fomba roa amin'ny smartphone Google, ny Nexus, tsy misy fanesorana Android foana, ho fepetra fiarovana.
Sary Ubuntu Touch ho an'ny Bq Aquaris E4.5 misy Android ankehitriny
Ny fisie izao dia misy hametrahana Ubuntu Touch amin'ny finday avo lenta Bq Aquaris E4.5 miaraka amin'ny Android, mora hapetraka miaraka amin'ny mpitari-dalana antsika.
Ahoana ny fametrahana Ubuntu amin'ny terminal Android
Hanolotra torolàlana ho anao izahay mba hianaranao ny fomba fametrahana Ubuntu ho an'ny telefaona finday amin'ny terminal Android anao amin'ny alàlan'ny programa developer.
Efa misy izao ny emulator Ubuntu Touch
Fampianarana kely hametrahana sy hanamboarana ny emulator Ubuntu Touch ao amin'ny Ubuntu mba hampivelarana fampiharana tsy misy smartphone miaraka amin'ity sehatra ity.